विशेषज्ञहरुका अनुसार मोबाइल र ल्यापटपमा सामाजिक मिडियासँग जोडिइरहनुको कारण हामी राती अबेलासम्म जागै रहन्छौं । यसको परिणामस्वरुप हाम्रो निन्द्रा पुरा हुन सक्दैन जसले स्वास्थ्यलाई एकदमै नराम्रो असर पुर्‍याउँछ ।
यसो सम्झनुस् त, हिजो राति सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईले के गर्नुभयो ? सम्भावना यो छ कि तपाईंले सुत्नुअगाडि मोबाइल वा ल्यापटपमा कुनै इमेलको जवाफ दिनुभयो अथवा फेसबुक वा ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहनुभयो ।
यस्तो गर्ने तपाईं एक्लै हुनुहुन्न । अमेरिकाको नेशनल स्लिप फाउन्डेसले गरेको एक अध्ययनका अनुसार ४८ प्रतिशत अमेरिकनहरु सुत्नुभन्दा अगाडि ट्याबलेट वा ल्यापटपजस्ता ग्याजेट प्रयोग गर्छन् । अन्य देशहरुमा गरिएका अध्ययनहरुका अनुसार यस्तो काम गर्नेहरुमा युवाको प्रतिशत बढी छन् ।
तर, सुत्नुभन्दा अगाडि ग्याजेट्स प्रयोग गर्ने हाम्रो लतले वास्तवमा हाम्रो निन्द्रा बिगारिरहेको हुन्छ । यसको प्रभावस्वरुप हामी धेरै समयसम्म निदाउनै सक्दैनौं र सुत्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि हाम्रो मन शान्त रहन सक्दैन । रातमा हाम्रो कयौंपटक टुटिरहन्छ ।
कयौं अध्ययनहरुका अनुसार रातमा यस्ता ग्याजेट्सको प्रयोगबाट तनाव बढ्छ र हाम्रो आत्मविश्वास र मानसिक स्वास्थ्यमाथि नराम्रो असर पर्दछ । निद पूरा नहुनाले हाम्रो कार्यक्षमता पनि कम हुन्छ र स्वास्थ्यमाथि दीर्घकालीन असर पर्दछ । तर, यसको आदतबाट छुटकरा पाउन मुस्किल हुन्छ । आउनुहोस्, जानौं किन यस्तो हुन्छ ?
हामीले याद गर्नैपर्दछ, सुत्नुअगाडि पुस्तक पढ्नु र टिभी देख्नु विलकुलै फरक कुरा हो र यी आधुनिक ग्याजेट्ससँग समय बिताउनु फरक कुरा हो ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार सुत्नुभन्दा अगाडि हाम्रो मष्तिष्क निन्द्राको तयारीमा हुन्छ । यसको लागि एकदेखि आधा घन्टासम्मको समय लाग्न सक्छ । यो समय दिनभरीको तनावबाट मुक्त भएर शान्त हुने समय हो । सुत्नुभन्दा अगाडि पुस्तक पढ्नु वा तातो दूध पिउनुजस्तो कामले निन्द्रा लाग्न मद्दत गर्दछ र हामी बिस्तारै निन्द्राको शरणमा पुग्छौं । तर, आधुनिक ग्याजेट्सले यी सबै प्रक्रियामा गडबडी गरिदिन्छ ।
क्यालिफोर्निया विश्विद्यालयका न्यूरोसाइन्स र मनोविज्ञानका प्रोफेसर मैथ्यू वाकर भन्छन्, ‘यस्ता ग्याजेट्सका कारण निन्द्रा लाग्न समय लाग्छ । किनकी हाम्रो मन शान्त हुँदैन । ब्याट्री सकियो वा बिजुली गयो वा इन्टरनेट कनेक्सन भएन र हामीले ग्याजेट्स चलाउन पाएनौं भने तुरुन्त निन्द्रा लाग्छ । तर, ग्याजेट्स चलाउनासाथ निन्द्रा भागिहाल्छ ।
उनी भन्छन्, ‘प्रायः यस्तो हुन्छ कि सुत्न भनेर पल्टिनासाथ फेसबुक वा ह्वाट्सएपमा कुनै सन्देश आउँछ र हाम्रो २०-३० मिनेट समय बर्बाद हुन्छ । जब हामी कुनै सन्देश पठाउँछौं, हामी त्यसमाथिको प्रतिक्रिया जान्न चाहन्छौं । यसको लागि हाम्रो इन्द्रीयहरु सक्रिय रहन्छन् । यसपछि हामी मोबाइल ओछ्यानको छेउमा राख्छौं र हरेक सन्देश र प्रतिक्रियातर्फ ध्यान दिन्छौं जसले हाम्रो निन्द्रा प्रभावित हुन्छ ।
कयौं ग्याजेट्सबाट निस्कने निलो किरणले निन्द्रालाई सघाउने हर्मोन मेलाटोनिनको प्रवाहलाई प्रभावित बनाउँछ र यसले हाम्रो शरीरका जैविक चक्रलाई पनि पूर्णरुपमा गढबडी ल्याउन सक्छ ।
किंग्स कलेज लण्डनमा इन्स्टिच्यूट अफ साइक्रैटीका विशेषज्ञ बेन कार्टर पछिल्ला केही वर्षदेखि निन्द्रामा प्रविधिको असरको अध्ययन गरिरहेका छन् र उनका अनुसार ओछ्यानको नजिक पोर्टेबल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस राख्नाले गहिरो निन्द्राबाट मानिसहरु बञ्चित हुने गरेका छन् ।
कार्टरले बच्चाको निदाउने ढाँचा बुझ्नका लागि गरेको २० अध्ययनको विश्लेषण गरे । उक्त अध्ययनमा जुन बच्चा आफ्नो शयन कक्षनजिक मोबाइल राखेर सुत्छ, उसको निन्द्रा कम गहिरो हुने पाए । यहाँसम्म कि जुन बच्चा सुत्नुभन्दा पहिला ग्याजेट्स प्रयोग गर्दैन, उसले पनि अर्को कोठामा मोबाइल राख्नेभन्दा कम गहिरो निन्द्रा सुत्छ ।